The Top 10 testosterone ester: Ndeipi yakakodzera kwauri? | AASraw
/Blog/garari/The Top 10 testosterone ester: Ndeipi yakakodzera kwauri?
Posted on 12 / 18 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Testosterone esters inogona kurondedzerwa seicho chaiyo che testosterone molecule ine carbon carins yakanamatirwa nayo. Iko carbon ketoni inodzora chikamu chekugovana, mumashoko akajeka kusagadzikana kwechirwere muropa rako. Iyo kushandiswa kwechirwere pamvura inotsanangurirwa nehukuru hwekakoni chain iyo ester ine. Long carbon chain rinoshandura kune ester yakareba uye nguva yakanyanya ester, kudarika kusagadzikana kwemishonga mumvura. Somuenzaniso, testosterone propionate ister yakaitwa nematatu emaketani maketani ccc. Kazhinji, izvi zvinoreva kuti kune matatu emaketani maketani mune izvi testosterone ester.
Wchifu chinonzi testosterone esters?
Nhau ye testosterone ester yakange ichivhiringidza kune vanhu vazhinji, uye iwe haugoni kuwana tsanangudzo yakajeka kunze kwenotsanangurwa yakajeka inopiwa nenyanzvi dzakawanda. Muchirevo chakareruka, unoda kutanga kuti unzwisise kuti ester ndeipi isati yasimuka kuti isanganise ne testosterone sex hormone. Ester inoshandiswa nemakemikari yakaitwa imwe, maviri kana matatu emaketani emaketani. Ukuru hwe ester ndeyekupedzisira nemhaka yehuwandu hwemaketani emakoni anowanikwa. Iwe zvino unogona kushandisa shanduko imwecheteyo kuti unzwisise testosterone esters. Sezvakatsanangurwa pamusoro peesters maduku ane zvishoma maketani emakisi akawanda anogadzikana mumvura uye neropa.
Mumuviri wako unogona kugadzira testosterone chaiyo iyo inonyanya kukonzerwa nekuita zvepabonde uye kuvaka musisi. Kune vanhu vane uwandu hwakanyanya hwe testosterone nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zveutano, vanogona kuenda kune testosterone therapy. Ikoko chiremba anokwanisa kupa maitiro akawanda e testosterone ester zvinodhaka izvo mushure mekutora izvo zvinosanganiswa neropa rako uye zvinopa mitezo yakafanana kune zvisikwa. Sezvaunokura, testosterone yekugadzira maitiro inoderera. Mahomoni anowanzokwirira panguva yekukura uye kuyaruka.
Nzira Yokugadzira Sei Testosterone Cypionate Yakagadzirirwa Kubva Raw Steroid Powders
Pazera remakore e35 uye pamusoro pematunhu e testosterone mumutumbi unotanga kuenda kunze kunyange zvirwere zvakadai se hypogonadism zvingakonzera. Ita testosterone esters madhara anowanzosiyana kubva kune rumwe rudzi kuenda kune rumwe, asi vazhinji vanobatana zvakafanana. Semuenzaniso, kuzvimba kwejojo ​​iyo inowanzoshandiswa pakushandisa mishonga inoshandiswa asi zvimwe zviitiko zvinosanganisira misoro, kusuruvara uye dzimwe nguva erections kwenguva refu.
Sei tichida testosterone?
Testosterone inowanzozivikanwa semhomoni yemurume. Iko vanhu vakawanda vasingazivi ndeyekuti varume nevakadzi vanobudisa hormone. Testosterone inonzi horroone ye androgen inobereka varume zviratidzo mumuviri wako. Iyo inobudiswa mune imwe nzvimbo mumuviri wako uye inoenda kune dzimwe nhengo dzomuviri kuburikidza neropa. Hemoni inogadzirwa munzvimbo dzinotevera;
Kune vakadzi vanobudiswa mumayamu
Muzvinyorwa zvinonzi adrenal zvinowanikwa kumusoro kwetsvo dzenyu dzinowanikwa mune varume nevakadzi.
Nhamba dze testosterone dzakakwirira kune varume kupfuura vakadzi. Kuvhiringidzika kwe testosterone pane zvepabonde kunogona kutungamirira kumigumisiro yakaipa inogona kuwedzera kana dambudziko racho risina kurapwa munguva.
Testosterone esters chati
Zvibereko zvakanaka Kuvandudza simba
Proviron uye Nolvadex
Testosterone cypionate uye testosterone enanthate
Avhareji yezana 250-750 pavhiki
Hafu-upenyu 2-3 mavhiki
Water chengetedzo Ehe
Action Dzayedered effects
Zvibereko zvakanaka Kuwedzerwa simba
Zvikanganiso Kusuruvara kwebvudzi, nyuchi, kuchengetedza mvura uye testicular atrophy.
Protection Rimwe tab yeNolvadex uye proviron zuva nezuva
kupora Clomid 1 tab kwemazuva 20
Testosterone decanoate uye testosterone Isocaproate
Avhareji yezana 50-100mgs pazuva
Hafu-upenyu Decanoate, mavhiki 3-4
Isocaproate mavhiki e2
Water chengetedzo Minimal
Zvibereko zvakanaka Kuvandudza simba, masimba akaoma uye simba rinowanikwa.
Zvikanganiso Bvudzi rinopera, gynecomastia, acne uye testicular atrophy
Protection 1 tab yeNolvadex neProviron muhupenyu hwose
kupora Clomid -1 tab zuva nezuva kwemazuva 20 mushure mekupedzisira kwekurapa.
HCG 2500-5000IU vhiki nevhiki, 20days mushure mekupedzisira kwekupora kwako.
Hafu-upenyu Yakareba kwenguva refu
Avhareji yezana Mavhiki 1000mg / 14
Action Yakareba kwenguva refu
Zvibereko zvakanaka Zviri nani kupora, vascularization zviri nani, kuwedzerwa simba, uye simba remaviri
Zvikanganiso Acne, hair loss, testicular atrophy uye gynecomastia.
Protection 1 tab ye proviron neNolvadex zuva nezuva mukurovedzwa kwehutano
kupora Clomid - imwe piritsi zuva rega rega kwemazuva 20 mushure mekurapwa.
Avhareji yezana 250mg / vhiki nevhiki
Hafu-upenyu 1-3 mavhiki
Action Kufara uye pfupi
Zvibereko zvakanaka Zviri nani kupora, simba uye kuwanda kwemafupa, kusimbiswa simba, uye vascularization zviri nani.
Zvikanganiso Bvudzi rinopera, acne, gynecomastia uye testicular atrophy.
Protection Proviron neNolvadex - 1 tab / zuva munguva yekurovedza kwako
Clomid- 1 tab zuva rimwe nerimwe kwema 20 mazuva mushure mekufamba
HCG- kutora chero chirwere chinobva ku2500-5000 IU vhiki imwe neimwe kwemazuva 20 mushure mekufamba kwako.
Ndezvipi zvinonzi 10 testosterone esters?
Mhinduro yekusagadzirisa testosterone ndeyokutsvaga rubatsiro rwechiremba kubva kuchipatara chako iri pedyo. I testosterone esters ndiyo yemishonga inoshandiswa kugadzira testosterone yako yakaderera uye yekuvaka musisi. Iko kune testosterone esters yakasiyana-siyana inowanikwa pamusika, zvisinei, haufaniri kuvatenga pamusoro pekambani, kuwana chirairo chakakodzera kubva kuchiremba wako. Idzo testosterone esters dzinowanzoshandiswa nevatambi uye vemuviri vomuviri vanoda kuvaka miviri yavo. Zvimwe zvekutungamirira testosterone esters zvinotevera;
Testosterone Acetate iri pakati pepakutanga testosterone esters kuti iiswe munharaunda yekurapa. Yakatemerwa kwekutanga ku1936. Testosterone acetate is an-acting-drug drug that comes in the form of the male testosterone hormone. Inopera nokukurumidza muropa rako iro rinoita kuti rive rakanaka kune varwere vazhinji kana kuti vatambi. Pamusoro pekushandiswa, acetate ester inotanga kushanda pedyo nokukurumidza inopesana nedzimwe estersterone esters dzinogona kutora nguva. Nemhaka yee testosterone shoma inotarisa hafu yeupenyu, iwe uchada kutora dhizii shoma mushure memazuva ose e2 kusvika kumazuva 3 kuti uchengetedze maitiro e testosterone ayo anogadziriswa.
Testosterone acetate injection inogona kuva inorwadza uye inogona kukonzera kuzvimba kana kusagadzikana panzvimbo dzejojo. Vatsva-vashandi vacharamba vachirwadziwa kwenguva yakati, asi mushure mekunge muviri wako uchizoshandiswa kumatare, iwe uchava wakanaka. Zvisinei, kana migumisiro ichi ichienderera mberi, zivisa chiremba wako kuti apiwe mamwe maitiro ekuenzanisa.
Testosterone acetate dosage zvinoenderana nechirevo chechiremba wako mushure mekutarisisa mamiriro ako. Zvisinei, mizinga yakatarwa inobva ku100mg, 200mg, 500mg, uye 1000mg asi Rangarirai chete mhosho yakarurama icharatidza mhinduro dzaidiwa. Nhamba yacho inofanira kugoverwa nachiremba wako, kana pavhiki imwe neimwe kana zuva rimwe nerimwe mushure mekuongororwa kwechiremba. Vamwe vanhu vachangodikanwa madhodzi maduku apo vamwe vanowedzerwa dhodzi vachange vakakwana. Usatenga mushonga wacho pasina zano rechiremba kubva pane izvo zvinogona kutungamirira kune zvakanyanya testosterone acetate madhara. Kana iwe uri mutambi iwe unogona kuenda kune testosterone acetate bodybuilding iyo ichakubatsira kuti uwedzere misimba yako nemuviri mashoma.
NeCASI: 1045-69-8, testosterone acetate ndechimwe chekukurumidza kuita steroid pamusika ikozvino yakakunda mwoyo yevashandi vakawanda vezvikwata. Chirwere ichi chinotanga kushanda pakarepo mushure mokutora nhamba yako. Iko kunokonzera kugadzirwa kwemamwe hormone e testosterone mumuviri wako iyo inobatsira mishonga yakasiyana-siyana kukura kusanganisira misumbu yako uye inopisa mafuta zvakare. Sekugadzirisa muviri, iwe uchazodikanwa kuti uende pamwe neyero nekudzidzira muviri uye kudya kwakakodzera kuti iwe uwane zvinogadziriswa. Chirwere ichi chiripo mune zvose muromo uye injectable maitiro zvichienderana. Nokudaro zviri pamusoro pako, kusarudza kuti ndipi iyo ndiyo yakakunakira iwe. Zvisinei, chiremba wako achava munhu akakurudzira kukubatsira iwe kuita chisarudzo chakanaka mushure mekuongororwa kwechiremba.
Testosterone Acetate hafu hupenyu uye hupenyu
I testosterone acetate iri pakati pezvinonyanya kushandisa zvinodhaka zvine hafu yeupenyu hwe2 kune mazuva 3 uye kupora kurapwa kwemavhiki mashoma e12. Chiremba achauya nechirwere chakanaka uye testosterone acetate cycle zvichienderana nehutano hwako uye izvo zvaunoda. Panewo sarudzo yezuva nezuva nevhiki yega yega, taurira chiremba wako zvaunofara nazvo, uye s / iye achakubatsira. Iwe unogona kushandisa zvakare mushonga pamwe chete nezvimwe zvirwere zvakadai seProviron kuti udzikise kusangana kwemigumisiro.
Zvimwe zvemashoko makuru e testosterone acetate ndezvokuti;
Inowedzera musimba kukura
Inovandudza musimba uye hutachiona hunosimba
Kuvandudza kushanda kwese kwemuviri
Iko kuzvipa-injection mishonga iwe unogona kuvhara mumasumbu ako mushure mekuratidzwa kuti ungazviita sei nechiremba wako. Testosterone cypionate inotengeswa inouya pasi pezita rezita rinonzi Depo-Testosterone, uye unogona kuiwana mumapuraneti akasiyana-siyana ari paIndaneti kana kubva mune zvekurapa. Muzviitiko zvakawanda, mushonga unotungamirirwa nehurumende nekuda kwemasimba ayo nemigumisiro iyo inogona kukonzera kana isingashandisi zvakanaka.
Testosterone cypionate iyo ine CAS Number 58-20-8, yakagadzirwa mukupedzisira kwe1940s asi yakatangwa nokuda kwekurapa mu1951. Kunze kwekushandisa kwechiremba, mushonga unoita sekuwedzera kuwedzerwa kwevatambi uye vadzidzisi vemuviri. Iyo inokurudzira kugadzirwa kwetrotoneone hormone mumuviri inokosha pakuvandudza uye kukurudzira musimba kukura uye kupa muviri kuti uve nesimba. Zvichienderana nezvamunoda, mushonga wacho unogadzirwa kuti uwane jekiseni kamwechete kamwe chete muZ1 kusvika kumavhiki e4. Zvinokurudzirwa kuti iwe enda kuenda kuongororo yezvechiremba kuziva chirongwa chakanaka chemamiriro ako kana zvido zvako.
Testosterone Cypionate nzira yekuita
Testosterone cypionate results zvakafanana nemamwe ose mishonga iyo ndeyekirasi ye androgen. Steroid muboka remishonga iyi inoshanda nenzira imwechete uye inoita mamiriro akafanana. Testosterone cypionate yakakosha pakurapa kwe hypogonadism muvarume sezvo inotsiva testosterone kuti muviri wako hauna kukwanisa kubudisa. Chiremba wako anogona kuisa nyore nyore testosterone cypionate injection mushure mekuongorora mamiriro ako. Mimwe yemigumisiro inowanzosangana nayo mushure mekushandisa izvi zvinodhaka marwadzo kana kurira pamusoro pejeri nzvimbo, nguva dzakasara, uye misoro pakati pevamwe.
The testosterone cypionate mitengo inopesana kubva kune mumwe mutengesi kune imwe, saka ita tsvakurudzo yako kutanga kuwana mutengesi anoyemekedzwa uye akavimbwa anogona kupa mishonga yemishonga pamutengo wakakodzera. Chiremba wako anogonawo kutamba chikamu chinokosha pakubatsira kuwana testosterone chepionate dose yakakodzera pamutengo unodhura. Kunyanya kuwedzera mishonga yemishonga kunogona kutungamirira kumigumisiro yakakomba, saka nguva dzose ita nechokwadi chokuti iwe unotevera mazano echiremba wako.
Ichi ndicho chirwere chinoshandiswa nejecha rakakurudzirwa testosterone cypionate ye 200 kusvika 800mgs pavhiki. Chiremba wako achapa chirongwa chakanaka zvichienderana nehutano hwemuviri wako uye zvaunoda kuzadzikisa nekuguma kwemhepo. Iyo jekiseni inofanira kugoverwa kuburikidza nemuviri wako wepamusoro kana mushure mako. Chiremba wako anogona kupa vhiki yega yega kana yeakacheki, kana iwe unogonawo kuenda kumwedzi wepamwedzi.
Testosterone Cypionate hafu upenyu
Testosterone cypionate steroid ine hupenyu hunoshingaira kusvika mumazuva e8 uye iri pakati pezvimwe zvinowanikwa zvinowanzoshandiswa nevadzidzisi vezvikwata. Iro testosterone cypionate injection inofanira kutorwa panguva dzemazuva e7 kuti zvive nani.
Mishonga iyi inobatsira zvikuru kune vose varikuuya uye vane ruzivo rwemuviri uye varwi. Testosterone cypionate inopa muviri wako simba rakakwana kuti uite basa rinokubatsira kuti uite kuti mushure uye mumuviri unoda iwe. Tichitarisa mitsva yakawanikwa nevashandisi vepakutanga kwechirwere ichi mushure mokunge yatumirwa, unogona kuva nechokwadi kuti ichi chirwere chinopa mukana wekubatsira mukugadzira muviri wako. Zvisinei, kuti iwe usangane nezvinangwa zvako, unofambidzana nemishonga yekudya zvakanaka nekushanda.
Vakawanda vanogadzira muviri vanoita steroid iyi sezvo ichipa zvibereko zvakanaka uye kwenguva refu. Iwe unogona kusarudza kuenda kumushandi wegore negore kunyanya kana iwe usinganzwisisiki nemajisi evhiki nevhiki. Zvimwe testosterone cypionate zvakakwana inosanganisira;
Kubatsira pakuchengetedza misungo yakaonda
Ita kuti musikana uwedzere kukura
Kupa nguva yakareba muviri yekuvaka muviri
Wedzera simba remuviri nesimba.
Kana iwe uri kutsvaga chidimbu chinokubatsira iwe kuvaka misumbu yako, kukupa simba uye kupisa muviri wako mafuta saka testosterone decanoate ndiyo chinhu chakanaka chako. Zvisinei, unofanirwa kunzwisisa kuti testosterone inouya nenzira dzakasiyana siyana uye rudzi rwaunosarudza runogona kuve nehuwandu hwekubudirira kwako wese muzvinangwa zvako. Vakawanda vanogadzira muviri vanoshandisa TESTOSTERONE DECANOATE STEROIDS kuti vatange uyerogen receptors mumuviri. Chirwere ichi chinopawo zvikomborero zvakasiyana-siyana zvakadai sekubatsira kuvandudza zvekuita zvepabonde kune varume vane erectile dysfunction. Nokuda kwematomu kukura nekusimbiswa, ichi chinodhaka chinoshandisa magic kana iwe ukatevera dheche yakakodzera uye kudya.
Testosterone decanoate yakawana kukoshesa kwayo nekuda kwemigumisiro yakanaka inopa kuvashandi. Pakutanga, mishonga yakashandiswa mukugadzirisa zvinetso zvepasi zve testosterone mukati mevarume, zvisati zvaonekwa kuti zvingabatsira varimi vemuviri kuti vawane zvinangwa zvavo. Ichokwadi chokuti chirwere ichi chinogona kuiswa kamwe chete pavhiki chinoita kuti chive chichidiwa kune vakawanda vanogadzirisa mashizha avo vasingadi muromo we steroids. Testosterone decanoate ihwowo mishonga yakanakisisa inobatsira mukuwedzera masero matsvuku eropa kuitiswa mumuviri. Kwemakore akawanda ikozvino kubva pakuiswa kwechirwere ichi, iri kuratidza kuva sarudzo iri nani kune dzakawanda zvepattosterone madhara muvarume nevakadzi.
Wchifeko che Testosterone decanoate?
Decanoate is ester, uye sezvinotsanangurwa pekutanga munyaya yacho, ester inhengo yehupenyu inobatsira ne pharmacokinetics chero ipi zvayo. Muchirevo chakareruka, inobatsira kutakura mishonga yacho kuburikidza nemuviri wako uye inobatsira zvikuru pamagadzirirwo ako nemuviri wako. Ester inosarudza hafu yehupenyu hwepi zvese zvinodhaka uye kuti ichagara kwenguva yakareba sei mumuviri wako. Testosterone decanoate bodybuilding ine hafu yehupenyu hwemazuva e7, zvinoreva kuti iwe uchazoda chete kuvhara mushonga kamwe kamwe muvhiki. Izvozvo zvinoreva kuti testosterone inoratidzika zvakafanana neda deca ndiyo yakanakisisa mishonga yevarume vane matambudziko mukuchengetedza mutsvuku.
Testosterone Decanoate Half upenyu
Mushure mokutora nhamba yako mushonga unogara uri kushanda mumuviri wako kwe7 kune mazuva 10. Nokudaro, iwe unofanirwa kutorwa kamwechete muvhiki. Tevera mirairo yechiremba yemigumisiro iri nani uye kuzadzisa zvinangwa zvako zvakanaka.
Nezvinangwa zvekuvaka muviri inonzi recommto testosterone decanoate dosge kubva ku 250mgs kusvika ku1000mgs pavhiki. Kune vanotanga kutora 250-500gms kwevhiki ichave yakanaka asi muyero unogona kuwedzerwa mumutambo unotevera. Kudya kwakakodzera uye kushanda kunenge kwakanaka pakuzadza zvikwereti zvakanyanya uye zvikomborero.
Testosterone decanoate zvinobatsira
Mhedziso huru ye testosterone yepanoti yaunofara nekushandisa iyi mishonga inonyatsosanganisira;
Itai kuti vabatsire zvikuru mukuita kuti musikana akure
Kuvandudza uye kuchengetedza misungo yakaonda
Kuvandudza muviri wose simba kana simba.
Kune rumwe rutivi, testosterone decanoate vs. cypionate inogona kushanda zvakafanana uye kupa mhinduro imwe chete, asi kusiyana kunouya muhafu yeupenyu. Mu testosterone decanoate, iwe unongoda kuvhara dose imwechete pavhiki kana uri mupipiyiti iwe unofanirwa kuzvivhara kamwe kamwe mumazuva maviri kana matatu. Izvozvo zvakakosha pamigumisiro iyi nemishonga ndeyokuti inogona kudzivisa kukanganisa kwepanyama kwe testosterone mumuviri wako zvinoreva kuti muviri wako hauzokwanisi kuvaka mishonga inodiwa mushure mokuzadzisa mishonga yemishonga. Zvichienderana nemasimba emuviri wako, unogona kuve nemigumisiro yakasiyana iyo inogona kuva yakaoma dzimwe nguva kana iwe usingashandisi dose yakakodzera. Semuenzaniso, unogona kuwana ruzivo rusina kujairika, kusuruvara kana acne dzimwe nguva. Nguva dzose tevera mirayiridzo yechiremba wako uye kana pane chero zviipi zvinokuvadza zvinomuudza.
Uyu mushonga wejojo ​​uyo unofanirwa kurapa mamiriro ezvinhu anokonzerwa nechepasi che testosterone sekusakwanisa kuvaka masumbu, kusava nesimba kana kuti kunonoka kuberekwa uye kumwe kusakanganiswa kwehomoni. Chiremba anofanirwa kupa mutemo testosterone enanthate sezvo kushandiswa kwayo zvisina kunaka kungaita kuti zvirege kugadziriswa.
Ita testosterone enanthate ndiyo imwe yeiyo inonyanya kuzivikanwa nevanabolic steroid kubvira pakasunungurwa kumusika mu1930s. Kusvika iye zvino, mushonga uyu unoenderera mberi kuva pakati peSteroid inonyanya kufarirwa nevakawanda vezvikwata zvemagariro nevatambi. Pakutanga, steroid yakanga isingabatanidzwi kune ester chero ipi zvayo yakaita kuti mushonga wacho uwane muropa ropa nokukurumidza. Muna 1937, mugadziri akatanga kusanganisa mushonga pamwe neester makemikari akachinja zvese zvose mu steroid ino. Mugore re 1950, muumbi wezvinodhaka akasarudza kuisa enanthate ester mujeri mumushonga unoipa simba iro vakawanda vanovaka muviri vari kufara nhasi.
Testosterone enanthate 250 ndiyo inowanzobatwa nemishonga inowanikwa pamusika. Zvisinei, chirwere chacho chinogona kugadziriswa nechiremba wako mushure mokuongorora mamiriro ako. Kune vatambi, mishonga iyi inokanganisa haigone kukubatsira kuti uvandudze kushanda kwako, asi ichakubatsira iwe kuzadzisa zvaunoda. Testosterone enanthate bodybuilding kunobatsira kutora misungo yako uye kutonga mafuta mumaviri ako. Sezvaunopfuurira nehutano hwako hwemazuva ose, iwe uchasangana nemishuvo nemuviri unhu iwe unofarira. Kana ukakundikana kuwana mitezo isingawanzoitiki, taura nachiremba wako kuti abatsirwe.
Testosterone enanthate inotengeswa inowanikwa pamasimamende akasiyana-siyana, uye mabhizimisi epaIndaneti, zvisinei, tenga chiremba pasi pehutano hwehutano hwako. Mishonga yemishonga inokuvadza kana iwe ukanyanyisa kana kuishandisa zvisina kunaka uye haugoni kuchinjwa. Kuti uve parutivi rwakachengeteka regai chiremba wako akupe mukana wakakodzera kwauri. Pashure pe testosterone enanthate cycle iwe unofanira kukwanisa kuona migumisiro, uye kana iwe usingaoni, taurira chiremba wako.
Vanachiremba vazhinji vanosarudza munhu mumwechete testosterone enanthate muyero kunyange zvazvo mishonga inouya mune zvakasiyana. Somuenzaniso, mishonga yemishonga inoparidzirwa maererano nezvinangwa zvaunoda kuwana zvakawanda kana iwe uri muumbi wemiti - muyero wakaenzana wechirwere ichi kubva pa 250mg pazuva kusvika 750mgs pavhiki. Mune zvimwe zviitiko, varimi vemuviri vanotora mizinga yakareba kusvika ku1000mgs vhiki nevhiki. Nhamba yacho inogonawo kugadziriswa nehutano hwako, nokuti vatangi ve 'vanotanga' kuderedza maitiro inokurudzirwa iyo inogona kuwedzerwa gare gare.
Testosterone Enanthate Half upenyu
The entithate Testosterone ine hafu yehupenyu hwemazuva e10.5, uye iwe unofanira kuwana mujenya wewaini yako shure kwemazuva 10. Zvisinei, chiremba wako anogona kugadzira vhiki yevhiki yakakodzera iyo ichaita kuti iwe uwane simba uye kuvaka misumbu.
Testosterone Enanthate Purogiramu
Testosterone enanthate ine maitiro akasiyana-siyana zvichienderana nehutano hwako, uye chiremba wako achava panzvimbo yakakwana yekugadzira yakanakisisa iwe. Semuenzaniso, mutangi we testosterone enanthate cycle anosanganisira kushandiswa kwemaduku maduku uye zvimwe zvakadai seArimidex uye Deca-Durabolin. Chirongwa chekutanga chiri chechipiri, mazamu anowedzerwa mushure mokunge muviri wako uchishandiswa kune mavambo ekutanga. Chirwere ichi chinoshandiswa pamwe chete ne Dianabol 40mgs zuva rega rega. Hardcore cycle ndeyepamusoro yepamusoro iyo yakakosha kune vashandi ve testosterone enanthate, uye pano madhesi akakwirira zvikuru.
Testosterone enanthate inobatsira
Ichi chiremba chinoratidza kuti chinotakura basa rinokosha mukusimudzira basa revarimi vemasvingo nevatambi. Kana kutorwa zvakanaka nemishonga kunogona kutakura zvakasiyana-siyana, testosterone enanthate zvakabatsirwa zvinosanganisira;
Wedzera uye kuvandudza kukura kwemasumbu
Kuvandudza mishonga inogadziriswa mushure mekukanganisa kana kutambanudza panguva yekushanda.
Wedzera simba rose remuviri nesimba rinobatsira vatambi uye varimi vemuviri vanozadzisa zvinangwa zvavo.
Bvisa muviri wemafuta uye ubatsire varimi kuti vawane mumiro wemiviri yavanoda.
Testosterone phenylpropionate (BAN) (zita rezita Testolent), kana testosterone phenylpropionate, zvichida kunzi testosterone hydrocinnamate, injinian anabolic-androgenic steroid (AASraw) uye anrogen ester - zvakajeka, iyo C17β phenylpropionate ester ye testosterone - iyo yaimbove yakakurudzirwa muRomania. Yakatanga kubudiswa mune zvinyorwa zvezvesayenzi mu1955 uye yakanga iri chinhu chezvinhu zvishomanana zvebhizimisi zveAAS, asi hazvina kumboshandiswa zvakanyanya. Testosterone phenylpropionate yakanga yakaitawo chikamu cheSustanon neOnnadren.
Testosterone phenylpropionate yakatanga kusunungurwa mumusika mu 1955 neSicomed Pharmaceutical imba asi yakanga iri kutengesa pasi pezita rokuti brand Testolent. Mushonga wacho hauna kuwanikwa kunyange pamusika wekunyama mushure mokunge wasunungurwa. Zvisinei, mumakore achangopfuura yakave ichiwanika uye yakagamuchirwa zvakanaka nevarimi vemweya pamwe nevatambi. Mushonga uyu wakanga uri chikamu chemamwe maonero akafanana neOnadren.
Testosterone phenylpropionate imishonga yakaiswa muboka re androgens remishonga. Testosterone phenylpropionate imishonga inofanirwa kutarisirwa kuburikidza nekujaira. Mushure mokujowa, mushonga wacho unoramba uchishanda kwemazuva anenge mashanu apo iwe unogona kutora mumwe muroti. Iyo mishonga inogona kushandiswa zvakasununguka kana inotungamirirwa nedzimwe maestresterone ester zve testosterone mishonga mune murwere anotsigira testosterone kusakwana. Kune rumwe rutivi, izvi zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinodhaka zvinoshandiswa pakunatsiridza masimba emuviri uye musimba simba.
Chiratidzo chakanaka icho vashandisi vanofanira kufungisisa pamusoro pezvinhu izvi ndechokuti kugadzirisa kwakadai sekuchengetwa kwemvura kunongowanzoitika nguva nenguva. Uyezve, nokutora testosterone phenylpropionate, bodybuilders vanotaura kuwedzera kwekuchiva, kusimba, uye unhu. Zvose mune zvose kuburikidza nekushandisa rudzi urwu rwe testosterone nenzira yakarurama zvinogadzirisa zvakafanana nezvimwe zve testosterone esters asi hazvidi kuti tishanyire kushungurudza, kana kukonzera kuchengetedza mvura.
Testosterone phenylpropionate inobatsira
Iyi testosterone steroid yakagamuchirwa pakati pevarimi vemuviri nekuda kwemigumisiro yakanakisisa pamuviri. Zvimwe zvezvinozivikanwa testosterone phenylpropionate zvipo inosanganisira;
Kuvandudza musimba kuvaka nekuvandudza nitrogen kuchengetedza simba.
Kukurudzira muviri wose simba, zvichiita kuti vatambi vashande kwenguva yakareba uye kuwana mhinduro inoda. Inowedzerawo kushanda kwese kwemugadziri wemiti uye mutambi.
Kukurudzirwa kwemasero matsvuku eropa muviri.
Deredza uye kupisa mafuta omuviri.
Testosterone Phenylpropionate Half upenyu
Testosterone phenylpropionate iri mishonga inoshandiswa nehafu yehupenyu hwe3 kune mazuva 4. Iwe uchazodiwa kutora dozi yako kamwe mumazuva 4. Mumwe mutano wezvehutano anofanira kutsigira jekiseni.
Vatambi vakawanda kana muviri anovaka muviri vanoshandisa chirwere ichi kaviri pavhiki kana mushure mamazuva maviri. Zvakarurama testosterone phenylpropionate dosage mhara kubva ku300gm kusvika ku3000mg kwevhiki. Zvisinei, testosterone phenylpropionate madhara haasi akaoma zvikuru kana achienzaniswa neaya emamwe steroid.
Testosterone Phenylpropionate Purogiramu
I testosterone phenylpropionate steroid inogona kushandiswa pamwe chete nedzimwe esters shomanana zvishoma kudarika 10-vhiki yevhiki. Chiratidzo che testosterone phenylpropionate rinoshandiswa rinofanira kusanganisira kuongorora kupindira kunenge kuine muyero we300mg kwevhiki uye yekare NPP ine chirongwa chinotarisirwa che 300mg nevhiki zvakare. Iyo pfupi yakareba inofanira kunge iri pasi pemavhiki gumi ekugadzirisa muviri.
Isocaproate is ester yakabatanidzwa kune anabolic steroid. Ndiyo ester iyo inogona kunge yakabatana nesterodi sezvinozivikanwa neCypionate or Enanthate esters. Kufanana neCypionate uye Enanthate, Isocaproate zvakare inogona kuendeswa kune hormone ye testosterone, zvisinei, nekuda kweIsocaproate, iyi inowanzova nzvimbo yepamusoro tinoona ichibatanidzwa. Testosterone-Isocaproate, chimiro chemonoester chisinganzwisisiki; pane mukana wekuti iwe unozviwana, zvaive zvingangoita kudai mukurumbira kuronga, uye hapana chidikanwi chero chipi zvacho chaiva neTesttosterone Isocaproate seester ester imwe. Kwatingawana iyo ester Irocaproate kakawanda uye iyo inoshumira chinangwa chakakwirira chiri mumasanganisi e testosterone; zvakajeka Omnadren uye Sustanon 250. Omnadren uye Sustanon-250 zvose zvose testosterone zvinokonzerwa neeseri ina dzakabatanidzwa; mana esters emasikisi akasiyana-siyana anoita musangano umwechete we testosterone.
I testosterone Isocaproate is ester, uye inongowanikwa apo inowanikwa kune steroid seOnnadren uye Sustanon 250. Nhoroondo ye ester iyi inogona kuwanikwa kubva ku1970s apo Sustanon 250 yakabudiswa pamusika. Basa reIsocaproate ester ndedze kuita kuti mushonga wacho ugare kwenguva yakareba mumuviri wako uye kubvumira mamwe maitiro e-steroid kushanda zvakanaka. Isocaproate ester inopa steroid hafu yeupenyu kubva ku7-9 mazuva.
Sezvo Isocaproate isipo pachedu, testosterone isocaproate dosage inowirirana zvichienderana nokuti yakabatanidzwa sei. Semuenzaniso, muSustanon 250 kuiswa kwekudya ichi ndi60mgs uye kuyerwa kweSustanon 250 mitsara kubva ku250mgs kusvika ku1500mgms kwevhiki. Chiremba wako achakupa mukana wepamusoro iwe zvichienderana nezvido zvako.
Testosterone Isocaproate hafu upenyu
Testosterone Isocaproate ine hafu yeupenyu hunoshandiswa kusvika kune 7-9 mazuva zvinoreva kuyerwa kwechipi nechipi steroid ichibatanidzwa neester ichi chinofanira kutorwa kamwechete pavhiki. Kunyangwe iwe ukazadzisa kutenderera kwako nhasi, iwe ucharamba uchinakidzwa nemishonga yezvinodhaka kwemazuva mashomanana anotevera.
Testosterone Isocaproate inobatsira inogona kugoverwa pamisanganisi yakafanana naOmnadren uye Sustanon 250 uye inogona kuparadzaniswa muzvikamu zviviri zvakapfupiswa; masimba anowanikwa nemafungiro ari pamusoro apa uye kuti rudzi urwu rwemakemikari anopa zvakasiyana neichete seest shape. Sezvakaongororwa pamusana pekutanga, simba re testosterone mutsindo ndekupa zviri nani ma universes maviri zvishoma uye pfungwa yakakura ye ester, uye izvi zvinopa zvose zvinoshingaira testosterone zvine zvinoguma kwenguva refu. Izvozvo zvingaita sezvinongoita zvishoma zvishoma zvakare, asi chokwadi chechinhu chacho hachisi chinhu chakanyanya kupfuura icho kupfuura icho. Panguva iyoyo, tine humwe hukomborero zvichienderana nemafungiro ari pamusoro apa, uye sekuti Omnadren uye Sustanon 250 vanoshandiswa zvakakwana kuti vashandise, isu tichatongofunga nezvezvibatsiro izvozvi.
Kana ari mutambi wemwaka-kunze, munhu wacho achitarisira kuwana zvakawanda zvakakura mashoma ane simba uye unhu hwakanaka, maitiro eIsocaproate ndiwo chigarire chakanaka sezvaanozopedza zvachose mativi maviri. Uyezve, nekutambanudza chimiro chemagetsi, iwe wakagadzirira kuwana hutano hwakaenzana nemisasa shoma kusvika kune mafuta kugoverana, uye iyo inokosha zvikuru. Misanganiswa yakafanana inogona kushandiswa pakucheka zvakare; zvinhu zvose zvinofungidzirwa, kunatsiridza kugadziriswa zvinoreva kuwedzera simba-inodya simba, uye se testosterone iyo miviri yakaonda yakachengetedza ichi ingori chisarudzo chakanaka chekugadzirisa chero kupi zvako.
Ichi ndicho chipfupi che testosterone ester icho chinoputika nekukurumidza muropa. Saka, kana uchida chigadziro chekuita nokukurumidza, ipapo testosterone propionate ichava sarudzo yakanaka kwauri. Zvisinei, mishonga inongova nehafu yehupenyu hwezuva rimwe chete. Nokudaro iwe uchafanirwa kuvhara mishonga zuva rega roga kusvikira nguva yacho isvika. Testosterone propionate mutengo yakasiyana kubva kune mumwe mutengesi kune mumwe uye kuyerwa kwaunoita. Kuenzanisa testosterone propionate vs Cypionate, maererano nekubudirira unogona kusarudza propionate sezvo inoshanda mukati mezuva, asi iwe unofanira kutora dozi yako zuva rega rega.
Kungofanana nedzimwe steroids, testosterone propionate yakagadzirwa mukutanga kwe1930 uye inotarisirwa kubatsira kubatsira maitiro e testosterone mahomoni mumuviri. Chirwere ichi chave chichizivikanwa pasi rose pakati pevarimi vekuvaka kuti vaone kuti zvinokosha pakuvabatsira kuti vaite zvinangwa zvavo. Kwemakumi emakore iye zvino chido chemishonga chave chichiwedzera pakufunga kubatsirwa kwazviri kune vashandisi izvo zvinosanganisira kuwedzera testosterone hormone zvakakosha zvakadai sekuvaka misumbu. Varume maitiro anonzi hormone iyi ndeimwewo chikonzero chekuda zvakanyanya.
Iko testosterone propionate cycle anotanga inoda kuti utange nemadhani maduku anobva ku50-100mgs kuti ajowe pashure pezuva 2-3. Nhamba yevhiki nevhiki ye testosterone propionate kubva ku200 kusvika ku500mgs.
Iyo mishonga inogona kuguma nemigumisiro yakakomba yevatangi vekutanga vanotora dheji yakawandisa kwekutanga. Chiremba wako achakupa muyezo wakakodzera mushure mekuongorora mamiriro ako. Iwe uchanzwa kuchinja kwe testosterone propionate kare uye shure kuitora. Yeuka nguva dzose kutevera mirairo yeiyo. Zvisinei, kana usinganzwisisiki nemaitiro ezuva nezuva, unogona kuenda kune jira rinotora mwedzi.
Testosterone Propionate hafu upenyu
Zviratidzo zve testosterone propionate zvine hafu yehupenyu hwemaawa e24 asi gel injectable ine upenyu hunoshingaira kusvika kumavhiki e4. Chiremba wako achagadzira nguva dzakanakisisa dzemazamu dzichakubatsira kuwana mhinduro dzaunoda.
Mushure mokunge mishonga ichibudiswa mumusika mu1930s. Yakaedzwa uye yakaratidzwa kubatsira kubatsira simba remuviri pamwe nekuvandudza kuvaka musisi. Chirwere ichi chinopa mishonga ine michina yakakodzera inovabatsira kuti ikure uye kana musarudzo achiita maitiro akafanira anogona kuva nechokwadi chekuwana muviri wemaoko inodiwa mumutambo. Kuvapo kwe testosterone mahomoni mumuviri wako zvinoreva kuti iwe uchava nezvakawanda zvekubatsira kunze kwekuvaka misumbu yakadai sekuvandudzwa kwevanhu vako sezvinoita izwi rakadzika uye kukura kwemvere dzemaziso pakati pevamwe vakawanda.
Zvisinei, kubvunza chiremba wako ichava nzira yakachengeteka yekuwana zviitiko zve testosterone propionate. Kuchengetedza kana kupfugama kumativi ejojeni kunowanzoitika, asi kunofanira kupera shure mushure mechinguva kana mhedzisiro isingaendi uye dzokerazve kuchiremba wako pakarepo. Kugovana mishonga pamwe nevamwe vanovaka muviri kunogona kuva nengozi sezvo usingazivi kuti mushonga wacho uchaita sei nemuviri wako. Kuongororwa kwechiremba kunokosha zvikuru kare uye mushure mokutora testosterone propionate dose yako.
Testosterone propionate zvinobatsira
Inobatsira kuwana pfupa yakaonda
Kuwedzera musimba kukura
Sustanon 250 steroid iri mushonga wejojo ​​kune varume vanorwara nechepasi chekuita testosterone yekugadzira uye maitiro ari kuramba ivo vazhinji vanobatsirwa. Sustanon 250 inobvumira vashandi kukudziridza hukama hwevarume hwavanoshuva sekudzikisa izwi ravo, kusimbisa masumbu uye kunyange kukura kwebvudzi pamuviri kana munzvimbo dzemaziso.
Sustanon 250 is steroid iyo yakagadzirwa neOn Organon Company muZ1970s kubatsira varume kuti miviri yavo isingagoni kubereka mahomoni ema testosterone. Mushonga wacho wakawana mukurumbira mukati pfupi nguva pfupi mushure mokunge wasunungurwa pamusika sezvo wakaratidza kuva mhinduro chaiyo kune vakwikwidzi vakawanda uye mizimba. Sustanon 250 inogadzirwa nekubatanidza 4 yakasiyana ye testosterone ester iyo inosanganisira, 30mg ye testosterone propionate, 60mg-testosterone phenylpropionate, 100mg-testosterone decanoate, uye 60mg-isocaproate. Iyo yakagadzirwa inoita kuti chigadzirwa chine simba uye chinoshanda kune vose vanogadzira muviri uye mamwe matambudziko echepasi e testosterone.
Nzira yekuraira Sustanon 250
Iyi injection inodhaka inogona kupiwa kamwechete pavhiki kana shure kwemazuva 3 nekuda kwesimba rayo inoita kuti ikwanise kushanda mumuviri wako kwemazuva mamwe. Kunyange zvakadaro mishonga yakarambidzwa nenyika inopesana nedoping agency, saka haisi yakanaka kune vanomhanya. Iwe unogona kuisa mushonga pamusana wako pachako kana purogiramu yekugara uchishanyira kuchipatara kuti uwane chirwere kubva kuchiremba wako. Iyo hafu yehupenyu inoshandiswa yakaita kuti iite zvakanaka kune vashandisi vazhinji asi nguva dzose ona madhagi kuti usadzivisa migumisiro.
Sustanon 250 yekuvaka muviri
Kunyanya, pasina testosterone mahomoni mumutumbi wako, zvingava zvakaoma kuti uwane hutu hwemashuga iwe unofarira semuumbi wemiti. Hazvina mhosva kuti kudya kwaunoita kana kubata muviri kwaunoita zuva rega rega, unofanira kunge uine mahomoni evanhu kuti uwedzere kushanda kwako. Mushonga unoshanda nekukurudzira muviri wako kuti ubereke maitiro akawanda eesrogen, kuitira kuti uwane unyanzvi hwe testosterone. Sustanon 250 inobatsira mukugadzirisa matambudziko ose anokonzerwa nemazinga epasi e testosterone kusanganisira kuvaka nekuchengetedza mutsvuku.
Izvo zvakanaka Sustanon 250 dheji yevarimi vemuviri vanofanira kubva pa 250mgs -1500mgs pavhiki. Zvisinei, 500-750mg inowanzojairika inorable dose pavhiki. Vamwe vanhu vanganzwa vasinganzwisisiki nemajekiseni eSustanon 250 mushure memazuva matatu asi kuenda kune vhiki yevhiki nevhiki zvichava pfungwa huru.
Ndezvipi zvinyorwa zveSustanon 250?
Kuwana kunonyanya kukosha kwamunofara mushure mekushandisa izvi zvinodhaka ndezvekuti testosterone inogara iri kwemavhiki mashatu mushure mokujaira. Izvo zvinoreva kuti iwe uchava nesimba rinodikanwa remuviri uye rakanakisisa rekuita zvepabonde pakati pemamwe maitiro e testosterone. Kune rumwe rutivi, kana ukashandisa mushonga kwenguva yakareba, unofanirwa kuenda kuongororwa ropa kuti uone maitiro ako e testosterone. Yeuka hutsika kana huwandu hwehomoni hungave hune ngozi. Chimwe chikomborero chikuru chauchawana kubva pakutora ichi chirwere chirikusimudzira nekuchengetedza mishonga yakaonda.
Testosterone Sustanon 250 zvinogara
Iyo Sustanon 250 miitiro inosanganisira mamwe maitiro kubvira musingagoni kuwana mishonga inonda yaunoda, uchishandisa Sustanon chete. Heino Sustanon bulking cycle;
Vhiki Sustanon250 Dianabol Ostarine
1 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
2 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
3 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
4 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
5 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
6 500mgs / vhiki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
7 500mgs / vhiki Off 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
8 500mgs / vhiki Off 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
9 500mgs / vhiki Off 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
10 500mgs / vhiki Off 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
11 500mgs / vhiki Off 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / vhiki
* ed rinoreva zuva rega rega / zuva
Ichi ndicho chirwere chekare chinoshanda chinouya mune capsule kana injection fomu. Chisarudzo chinogara chiri chako, asi mapoka maviri emitambo anosiyana maererano nekubudirira. Mishonga iyi yakakosha kune varume vane maitiro ezasi e testosterone kana miviri yavo isingakwanisi kubudisa hormone inodikanwa. Iko testosterone Undecanoate inogona kubatsira mukurudzirwa kwehuviri hwemuviri huno sekuwedzera kwezwi, kugovera mafuta uye kuvaka musisi.
Testosterone undecanoate yakagadzirwa muZ1980 ne Organon Drug Company iyo inotarisira kupa testosterone zvinodhaka izvo zvisina kuenda nechiropa. Uyewo, chirwere chacho chaive chirevo chekusika an anabolic androgen steroid (AASraw) iyo inogona kubatsira mukurapa kwepamusoro wekupedza testosterone mumarume. Zvisinei, kuiswa kwevamwe testosterone esters iri kuratidza kusimba pamusoro pekupa migumisiro, testosterone undecanoate inononoka kupararira mukurumbira pakati pevashandi vemasangano akawanda nevatambi.
sei ino Testosterone undecanoate mabasa
I testosterone undecanoate inopinda nepine lymphatic system uye kwete chiropa semamwe steroids. Nokudaro, chirwere chinopinda muropa risina kuparadzwa kana kubatwa nechiropa chinoreva iwe unonakidzwa nemigumisiro yakazara. Iyo nzira ye steroid inopinda mumuviri wako inoita yakasiyana nemamwe methylated steroids.
Testosterone yepabonde yepabonde inobatsira basa mumuviri kurasikirwa nemafuta, kuwana simba uye kuvaka musimba pakati pevamwe varume. Nyanzvi dzakawanda dzevashandi uye vashandi vomuviri vanoshandisa kushandisa iyi mishonga kuti vawedzere misimba yavo pamwe nekuvandudza kushanda kwavo. Kunyange zvazvo testosterone undecanoate inonzi iine steroid isina simba, inogona kuva nemigumisiro yakanaka pamisimba yako yekuvaka nekushanda apo iwe unotora dhesi rakapfurikidza pamwe chete nekudya kwakakodzera.
Zvisinei, avo vasingashandisi zvinodhaka zvakanaka vachawana migumisiro iyo inogona kurapwa kana iwe ukasangana nechiremba wako munguva. Testosterone undecanoate bodybuilding inogona kuva yakanaka kana iwe uchienda kune jeri testosterone undecanoate iwe unogona kungotora kamwe chete muZ10 kana mavhiki 14. Zvichienderana nehutano hwako chiremba achagadzira muyero uye chechokwadi che testosterone undecanoate cycle kwauri. Iko inonzi capsules ya testosterone undecanoate hafu yeupenyu inomhanya kwezuva, uye iwe unofanira kutora dozi yako zuva rega rega.
Zvimwe zvemashoko makuru e testosterone undecanoate zvinosanganisira;
Kuvandudza kurasikirwa kwemafuta
Kuwedzera chivimbo chako
Kuvandudza misuli inobudirira
Nevashandi vezvemuviri kana vatambi vheti ye testosterone undecanoate inotanga kusvika 480mg pazuva. Zvisinei, kune vashandisi venguva yekutanga, chiremba anogona kuderedza doses uye owedzere iyo nenguva. Paunosarudza kuunganidza mushonga pamwe nedzimwe steroid, 200-250mgs ichava yakanaka. Mushonga wacho unofanirwa kutorwa musati wazodya chisati chave chisati chamangwanani uye manheru manheru usati wadya.
Testosterone Undecanoate zvinogara
Iwe unogona kushandisa steroid pamwe chete nemamwe mavara akaita se deca Durabolin, trenbolone uye promobolan. Kana ukasarudza kushandisa andriol nedzimwe nhengo, ipapo zvinorayirwa kuti zviishandise mumitengo yakadzika yakadai se240mg pazuva. I andriol ichashanda seyero yekutarisa uye ichapa mamwe maitiro mukana wekushanda zvakanaka pasina kuwanikwa nemimwe migumisiro yemigumisiro.
Vhiki Andriol Promobolan Aromasin Cardarine N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / vhiki 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / vhiki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / vhiki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / vhiki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / vhiki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ED zvinoreva zuva nezuva kana zuva rimwe nerimwe
Ichi chirwere chinonzi anabolic icho chakatanga kubudiswa mu1961 muEast Germany nemishonga inonzi Jenapharm Company yekurapa zvirwere-kuparadza zvirwere. Mishonga iyi yakawana mukurumbira mushure mekunge yakanzi yeEast German Olympians kubudirira mu 1960s kusvika ku1980s. Turinabol ikozvino inoshandiswa nevatambi uye mizimba yekuvandudza muviri yavo miviri nemisungo pamwechete nesimba ravanoda kuti vadzidzise mumabasa avo ose. Kune vanovaka muviri, unogona kuzadzisa zvinenge zvisingawanikwi kana ukashandisa mushonga zvakanaka.
sei inoita Turinabol mabasa
Iyo turinabol dhegi inowanikwa chete mumuromo wemapapule fomu. Parizvino, hapana chimiro chisina kuvharwa chechi steroid. Hapana TURINABOL YOKUVENGA, uye mushonga wacho unongowanikwa murasi yepasi pevhu. Kudiwa kwechirwere ichi chiri kuwedzera kukurukura turinabol migumisiro inopa kuvashandisi. Chirwere ichi chinozivikanwa kuburikidza nekubudirira mukuvandudza mapuroteni emuviri wemapineti, kuvandudza huwandu hwehuwandu hwemitrogen huwandu mumatumbu pamwe nekuwedzera masero matsvuku eropa kubudisa. Iyo turinabol rinotarisana nezvido zvako, asi iwe unogona kutora 50mg zuva rega rega kwevhiki kana vhiki mbiri. Kunyange zvakadaro, chiremba wako anogona kugadzira yakanakisisa dhigiriji iwe iwe mushure mokufunga nezvehutano hwako.
Turinabol (Tbol) inoratidzika seyo steroid yakanakisisa kune vashamisi vakawanda uye miviri yemuviri nekuda kwekubatsira kwayo kwakanyanya mukuwedzera simba remasimba uye kusimbisa musimba. Kufambidzana nemishonga ine kudya kwakakodzera uye kubasa kwakanaka iwe uchava nechokwadi chokuti uwane mhinduro inoda. Steroid inopa muviri wako nemapuroteni anokosha anozoita kuti mishonga ikure pamwe nekupisa mafuta emuviri. Kushandisa ichi chirwere, haufaniri kunetseka nezve estrogenic migumisiro yakafanana nekushaya hope, kuchengetwa kwemvura, uye kukwirira kweropa. Nokudaro, avo vanotarisana nemigumisiro yemigumisiro ivo vachave vakasununguka nemurwere uyu.
Mimwe yeTurinabol inobatsira iwe uchanakidzwa nekushandisa iyi mishonga inosanganisira;
Kuvandudza simba remasumbu
Ipa misumbu yakasimba
Fadzwa nezvibereko kunze kwekutora kuwanda
Low mazinga emigumisiro
Kuvandudza kushandiswa kwemhuka kwe testosterone hormone
Iyo yakakurudzirwa Turinabol mamiriyoni evarume ndeye 20 ku 50gms pazuva, uye iwe unogona kuishandisa pamwe chete nemimwe miviri yemigumisiro iri nani. Pakave nekuona kwakashata kuti semuiti wekugadzirisa unofanirwa kushandisa maseroji kuti uwane migumisiro. Vakadzi vanofanira kutora madhijidhi maduku e-2.5 kusvika ku7.5mgs pazuva kubva pahotera huru inogona kutungamirira ku virilization.
Turinabol hafu upenyu
Turinabol (Tbol) ine upenyu hwehafu yeawa 16. Nokudaro iwe unofanirwa kutora dhigi yako kamwe chete pazuva - zvisinei, vamwe vashandi vehuviri vakaita sekuparadzanisa muyero mumaawa maviri e12 awa zvakare akakodzera kuchengetedza ropa rakanaka.
Iyi steroid inogona kushandiswa pamwe chete nedzimwe nhengo dzakadai seDbol, N2Guard, uye Cardarine yemigumisiro yakanaka uye kuderedza migumisiro yemigumisiro.
Vhiki Tbol Dbol N2Guard Cardarine
* ED inomirira zuva rimwe nerimwe.
Ipi testosterone ester yakakunakira iwe?
Iye zvino zvaunonyatsoona zvakanakisisa testosterone esters zviripo pamusika, chinetso chinouya zvino pakugadzirisa zvakakunakira iwe. Vanhu vane maitiro akasiyana-siyana kumishonga yakasiyana-siyana, chii chingave chiri kushanda kuti shamwari yako irege kuva yakakwana kwauri. Vanhu vane zvakasiyana pakuumbwa kwemuviri, uye chiremba akanaka anogara achiongorora mamiriro ako epakutanga vasati vasarudza mishonga yakakodzera.
Dambudziko rekutengesa testosterone rinoda mushonga wega woga kuti uwane mhinduro inoda. Semuenzaniso, kana iwe uchienda maererano nemafungiro evanhu, vamwe vachakutaurira kuti acetate ndiyo yakanakisisa, vamwe vachakutaurira kuti utenge cypionate kana kunyange decanoate. Nzira yakanakisisa yekusarudza testosterone esters yakarurama ndeyokuona chiremba uye kutsanangura dambudziko rako ipapo iye / iye achapa mishonga yakakodzera.
Ndezvipi zvirongwa zvokusarudza testosterone esters zvakanaka kwauri?
Kurota kwevashandi vekugadzira muviri ndokwekuva muviri wakanaka kutarisa muviri, kufanana muviri wose, uye musimba hwakasimba. Zvisinei, mamwe mamiriro ezvinhu akadai sepaseti testosterone mumutumbi anogona kukuramba iwe mukana wokubudirira mubasa rako.
Kuwanda kwevashandi vemuviri vanoshandisa testosterone esters kuti vabudirire mishonga yavanoda mushure mekushanda kwekuita muviri. Kazhinji, muviri wako hauna testosterone yakawanda yekuvaka masimba ako uye kukupa simba raunoda semuiti wekugadzira muviri. Zvinoreva kuti iwe unoda kuvasimbisa pamwe neseri dzakakodzera.
Saka unosarudza sei testosterone esters?
Parizvino, musika uzere nezvakasiyana-siyana zve testosterone esters zvinogona kuita kuti zvive nyore kwauri kuti usarudze zvakanakisisa. Vese maronda anoti ndeaakanakisisa uye kupa mhinduro kune dambudziko rako. Zvisinei, unofanirwa kuchenjerera zvakanyanya sezvaunotsvaka rubatsiro kubva kune unyanzvi hwehutano. Funga nezvemashoko anotevera kana ukasarudza testosterone zvakasimba;
1. Kunzwisisa zvaunoda
Usati washanyira chiremba wako kuti akupe mazano, tanga uchinzwisisa dambudziko rako. Somuenzaniso, kana dambudziko rako riri kusakwanisa kuzadzikisa mishonga yakakosha kana kunyange iwe uchida kupisa muviri wako mafuta ayo achaita kuti chiremba webasa rako rive nyore kuziva chirwere chakanakisisa kwauri. Idzo testosterone esters dzine zvimwe zvakasiyana-siyana zvekugadzirisa chinetso chakasiyana. Zvimwe zvakakwana kuvanhu pasi pemishonga yezvirwere zvakasiyana apo dzimwe dzisingashandisi nemimwe mishonga. Usaita chikanganiso chekutenga mishonga kubva kune yako yechitoro iri pedyo pasina utano hwehutano. Iwe uchange uine hupenyu hwako pangozi sezvo uchigona kuve nemigumisiro inogona kukonzera utano hwako.
2. Rudzi rwe testosterone esters
The Testosterone zvigadziri zvinouya mumhando dzakasiyana dzezvimwe zvechisikiro asi vamwe vanoita mishonga yemishonga. Chiremba wako achava panzvimbo yakanaka yekutsvaga zvakanakisisa iwe iwe mushure mokuongorora hutano hwako. Mumuviri wako simba rinokosha pakutora mishonga iyi; muviri wako unogona kushanda zvakanaka nezvimwe zvinowedzera. Zvakare zvichienderana neshoko rako re testosterone, chiremba achaziva rudzi rwakanaka rwokukubatsira kuti uite zvinangwa zvako.
3. Unhu uye kubudirira
Ita testosterone ester inoshanda nenzira imwechete, asi kusiyana kunouya mukubudirira kwavo. Mhando dzakasiyana dzakasiyana-siyana, imwe mishonga inoda kutorwa kamwechete muvhiki vamwe kamwe kamwe muZ2 kana 3 mazuva. Zvido zvako zvino zvichabatsira chiremba wako mukusarudza chirevo chakajeka kwauri. Kana iwe usingasununguswi nejecha testosterone esters, unogona kuudza chiremba wako kuti atsvake mishonga yemuromo.
Nyaya inonyanya kukosha paunosarudza kana kushandisa testosterone boosters ndeyekubatanidza chiremba wako mune imwe nhanho. Kurapa migumisiro yechirwere kunogona kudhura uye dzimwe nguva haugoni kuchinja mamiriro acho ezvinhu. Usambofa wakakosha mutengo paunosarudza testosterone esters yakarurama sezvo zvichikwanisa kuwana michina yakaderera kana iwe uchienda kune yakasvibiswa chigadzirwa. Zvisinei, usaputsawo bhanhire rako pamishonga iyi, funga kubudirira uye unhu hwemigumisiro yaunotarisira.
Dudley, RE, & Constantinides, PP (2018). S. Patent Application No 15 / 723,985.
Guercia, C., Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Kuongororwa kwe testosterone fatty acid esters muzvinyoro zvekudya zve mussels kuburikidza ne-liquid chromatography-yakakwirira kugadzirisa mass spectrometry. Steroids, 123, 67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., & Gillyar, C. (2018). S. Patent Application No 15 / 714,541.
Zvose Zvinhu NezveTrenbolone Enanthate Powder
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2018
10 zvinhu zvaunofanira kuziva musati watora DMAA Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Ne Dianabol Powder For Sale